राजनीति - Sano Aawaj
भीम रावललाई सम्झाउन सकिएन
Breaking news 1, breaking news 3, Nepse Update, ट्रेन्डिङ, ताजा अपडेट, राजनीति
चितवन । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफूले भीम रावललाई सम्झाउन नसकेको बताएका छन् । सोमबार बिहान अध्यक्ष ओलीले आफूले रावललाई उपाध्यक्षमा बस्न आग्रह गरेको तर उनले नमानेको बताए । "उपाध्यक्ष बस्नु भनेँ, अध्यक्षमा लड्ने भन्नु'भाे । सम्झाउन सकिएन । उपाध्यक्ष भएर काम गर्न आदेश दिएँ । मानिरहनु भएकाे छैन । उम्मेदवारी नदिन आग्रह गर्छाैं," ओलीले भने ।...
Breaking news 2, Nepse Update, ट्रेन्डिङ, ताजा अपडेट, राजनीति
मोरङको पथरी शनिश्चरे नगरपालिकाका मेयरले वडा अध्यक्षलाई बैठक कक्षबाट निकालेका छन् । सोमबार वार्षिक समीक्षा गोष्ठीमा मेयर दिलिपकुमार राईले पथरीशनिश्चरे-४ का वडा अध्यक्ष गोबिन्दबहादुर भण्डारीलाई नगरप्रहरी लगाएर निकालेका हुन् । समीक्षा गोष्ठीमा वडा अध्यक्ष भण्डारीले पालिकामा ब्यापक आर्थिक अनियमितता भएको जवाफ मागेका थिए । उनले इन्धनका लागि छुट्याएको ४२ लाख, सवारी मर्मतका लागि छुट्याएको ३० लाख र फर्निचरका लागि छुट्याएको ५० लाखको हिसाब देखाएर मात्रै बैठक अघि बढाउन माग गरे ।बैठकअघि बढ्न नदिएपछि मेयर राईले नगरप्रहरीलाई बाहिर निकाल्न निर्देशन दिए । निर्देशनपछि दुईजना नगरप्रहरीले उनलाई निकालेपछि मात्रै छलफल सुरु भएको थियो । ‘पालिका भित्र अनियमितता भयो, हिसाब देखाउल भन्दा नगरप्रहरी लगाएर मलाई निकाले,’ भण्डारीले भने, ‘नगरप्रहरीले हातपात पनि गरे ।’ मेयर र नगरप्रहरीले आफूमाथि अभद्र व्...
प्रचण्डलाई स्वागत गर्न नगरपालिकाले दियो सार्वजनिक बिदा
Breaking news 1, Nepse Update, ताजा अपडेट, राजनीति
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'लाई स्वागत गर्न रामगोपालपुर नगरपालिकाले सार्वजनिक बिदा दिएको छ। नगरपालिकाभित्रमा नवनिर्मित स्वास्थ्य संस्था उद्घाटनको लागि प्रचण्ड आउने भएपछि स्वागतको लागि बुधबार एक दिनको बिदा दिइएको हो। मेयर अशोककुमार मण्डलले जारी गरिएको प्रेस विज्ञप्तिमा अध्यक्ष प्रचण्डको स्वागतका लागि मंसिर १ गते बुधबार सार्वजनिक बिदाको घोषणा गरेका हुन्। नगरपालिकाले सार्वजनिक बिदा दिएपछि सामाजिक सञ्चालनमा आलोचना भएको छ। नगरपालिका अन्तर्गतका आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रहरू वडा नम्बर २,३,४,६,७, ८ र ९ को उद्घाटनका लागि प्रचण्ड महोत्तरी आउने कार्यक्रम रहेको नगरपालिकाको सो विज्ञप्तिमा उल्लेख रहेको छ। प्रचण्ड मध्यान्ह १२ बजे रामगोपालपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा राखिएको खुल्ला सभालाई सम्बोधन गर्ने छन्। कार्यक्रमको तयारी पूरा भएको नगरपालिकाको कार्यालय...
breaking news 3, अन्तर्राष्ट्रिय, अपराध, राजनीति
नेपाल रेडक्रस सोसाईटीको विशेष महाधिवेशनमा लफडा भएको छ । लफडा भएपछि विशेष विधान महाधिवेशन स्थगित भएको छ । थापाथलीस्थित कार्की ब्याङ्केटमा आयोजित विशेष महाधिवेशनमा असन्तुष्ट समूहले तोडफोड गरेपछि स्थगित भएको हो । विधान विपरीत कारबाही गरेका १६ जिल्लाबाट आएका रेडक्रस सम्बद्ध व्यक्तिहरुले तोडफोड गरेका हुन् । रेडक्रसका सभा विथोलिएपछि असन्तुष्ट समुहले ज्याकेट समेत कब्जा गरेर लगेको छ । उनीहरुले कर्सी समेत भाँचेका छन् । रेडक्रसले कारबाही गरेका १६ जिल्ला समितिबाट आएकाहरुले सभास्थल बिथोलेका थिए । रेडक्रसको विधि र विधान विपरीत काम गरेका,वैधानिक दायित्व पूरा नगरेका ती जिल्ला समितिहरु भंग गरेर विधान बमोजिम केन्द्रीय समितिले तदर्थ समिति गठन गरिदिएको थियो । सुनसरी, मोरङ,सिराहा, रौतहट, पर्सा, काठमाडौं, गोरखा, रोल्पा, जाजरकोट, रूकुम पश्चिम, हुम्ला, चितवन, बागलुङ, मकवानप...
Breaking news 2, breaking news 3, Nepse Update, ताजा अपडेट, राजनीति
नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले पार्टीको आकर्षण बढेको बताएका छन् । स्थायी कमिटी बैठक उद्घाटन गर्दै अध्यक्ष नेपालले नेकपा एमाले छोड्ने लहर नै चलेको बताए । ‘साना पार्टीहरुबाट पार्टी प्रवेश गर्ने क्रम जारी नै छ, मूख्यगरी एमाले छोड्नेको लहर चलेको छ’, अध्यक्ष नेपालको भनाइ थियो । डडेलधुराबाट एमाले अध्यक्ष सहित ठूलो पंक्ति पार्टी प्रवेश गरेको बताउँदै अध्यक्ष नेपालले अन्यत्र पनि उस्तै लहर आएको बताए । नेकपा माले छोडेर चार नेता पार्टीमा प्रवेश गरेको र अन्य नेताहरुसँग पनि कुरा चलिरहेको जानकारी दिए । शनिबार शुरु हुने केन्द्रीय कमिटी बैठकको एजेण्डा तय गर्न बानेश्वरस्थित एक ब्यांक्वेटमा बैठक चलिरहेको छ । ‘केन्द्रीय कमिटी बैठकमा प्रस्तुत गरिने एजेण्डाबारे छलफल भइरहेको छ’, प्रवक्ता जगनाथ खतिवडाले भने । स्थायी कमिटी बैठकमा सम्मानित नेत...
गगन थापाको च्यालेन्ज बिरुद्ध दिए बिप्लवले कडा चेतावनी
Breaking news 1, Nepse Update, ट्रेन्डिङ, ताजा अपडेट, राजनीति, रोचक खबर, व्यक्तित्व
बिध्यार्थी तथा रास्ट्रिय कराते खेलाडी विप्लव खड्काले MCC(मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन) ले मागेको सम्झौता विरुद्ध देशका सबै युवाहरुलाई सडकमा उत्रि घोर विरोध गर्न आग्रह गरेका छन। देशलाई बन्धकी राखेर सम्झौताको अघि अमेरिकाले देश बिकासका नाममा दिनलागेको रकमको लोभमा परि घुडाँ टेकेर सम्झौता पास गर्न नदिन हरेक नेपालीलाई आवाहन गरेका छन। एमसिसी लाई देशमा ल्याउने पक्षमा जनता समाजवादी पार्टी, केपी ओली र शेर बहादुर देउवा रहेको तर हामी नेपाली युवाहरू मिलेर देशमा गलत गतिविधिलाई गर्न खोज्ने हो भनि हामी हाम्रो ज्यान दिएर भएपनि देशमा MCC पास गर्न नदिने खड्काले बताए। हेर्नुहोस् विप्लव खड्का संग सानो आवाजले लिएको अन्तरबार्ता... ...